Ny Global Voices Mihaona Amin’ny Media Mahazatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Novambra 2017 7:29 GMT
Niseho teny rehetra teny tany anaty media mahazatra ireo blaogeran'ny Global Voices tato ho ato! Ny andiam-pandaharana amin'ny radio “Future Tense” an'ny Mediam-bahoaka Amerikana, dia mifantoka amin'ny tetikasanay ankehitriny. Azonareo renesina ny fandaharana an-tserasera (ao anaty RealAudio) na, raha toa ianareo any Etazonia na Kanada, dia miraisa feo amin'ny fandaharana. (mampiely ho toy ny ampahany amin'ny “As It Happens / Tahaka Izay Nisehoany” eo amin'ny CBC ny Future Tense).
Nasongadin'ny “The Connection”tao amin'ny foiben'ny fampielezampeon'ny Boston, WBUR ireo blaogeran'ny Global Voices: Rebecca MacKinnon, Hossein Derakshan ary Jeff Ooi tamin'ny Alakamisy (30/06/2005), niaraka tamin'ny namanay tsara Julien Pain avy amin'ny Reporters Without Borders. Azo renesina an-tserasera amin'ny RealAudio ilay fandaharana, mikasika ireo “mpanohitra ety anaty cyber”.
Nasongadina tao amin'ny vohikalan'ny BBC tamin'ny 05/07/2005 ny tafatafan'i Clark Boyd niaraka tamin'i Sokari Ekine, blaogeran'ny Black Looks,.
Ary Ndesanjo Macha mpiara-miasa amin'ny Global Voices dia ampahany amin'ny vondron'ireo Afrikana mpanao gazetin'ny ONG Britanika Panos nentina tany Ekaosy mba handrakotra ny fihaonambe G-8. Mitatitra mikasika ireo hetsika izy ao anatin'ny blaoginy amin'ny fiteny Angilisy, Swahili , ary ny bilaogin'ny vondrona Panos sy ao anaty gazetin'ny Metro.